Shiinaha SIZ warshad iyo shirkado | GOODTONE
Qurxinta joomatari waxay bixisaa moodal aan cilmi ku fadhiyin. Ku noolow dabeecadda sareynta bilicsanaanta. Adoo adeegsanaya xariiq fudud si aad khayaali ugu rido nolosha.
Ka mid noqoshada Palo Alto Design Group bishii Oktoobar 1995. Chen wuxuu ku kasbaday fulinta iyo maaraynta naqshadeynta Palo iyo Flextronics International.Chen hadda waa Agaasimaha Hal-abuurka ee Shirkadda 'Xcellent Product International' Ka dib markii uu dhammeeyo daraasadda naqshadeynta dheeriga ah ee halka sano ah ee Caalamiga ah ee Elite. oo ay qabteen magaalada Munich, Jarmalka iyo San Francisco, USA, Chen wuxuu cusbooneysiiyay badeecada warshad dhaqameedka isaga iyo kooxdiisa. Isaga oo fikraddiisu tahay "Product VALUE Identity", Chen wuxuu ka caawiyaa shirkadaha soo saarista badeecada, waxay qeexayaan jihada horumarinta wax soo saarka, iyo xaddiga qiimaha suuqa. ee sumadda.
Muddo tobanaan sano ah, oo leh ruuxa “Naqshadaynta Farxadda leh”, naqshadeynta Chen waxay daboolaysay dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin muuqaalka kombuyuutarka, alaabada Photoelectric, badeecada 3C, alaabada guryaha iyo qalabka guryaha. Aurora, oo ah badeecada ugu iibinta badan. Bishii Abriil 2006 iyo 2007, Chen waxaa lagu casuumay inuu kaqeybgalo Bandhigga Naqshadeynta Farshaxanka ee Caalamiga ah ee Milan, kooxdiisuna waxay ahayd kooxda kaliya ee si sharaf leh loogu casuumay Taiwan. Sannadkii 2010, Chen ayaa naqshadeeyay shaqo yaab leh oo aan dhammaad lahayn oo loogu talagalay Mainland China, HongKong iyo Taiwan.
"Nolosha u noolow" macnaheedu waa inaad ku noolaato kuna raaxeysato noloshaada halkii aad ka noolaan lahayd. Shiinaha ayaa ku socota horumar heer sare ah. Dadku uma sii halgamayaan sidii ay ugu noolaan lahaayeen sidii hore. Waxaan rajeyneynaa inaan helno jawi shaqo oo wanaagsan oo raaxo leh. Waxaan isku dayayaa inaan idhaahdo, qaabkan qeexida ah, warshadaha oo dhami waa inay ogaadaan u janjeera, soo saarida alaab dadka ka dhigi karta inay dareemaan diirimaad.Tani waa hadafka aan dhamaanteen u baahanahay inaan ku guuleysano.
Naqshadeynta qaabka Minimalist
Khadadka hodanka ah iyo rafcaanka rafcaanka ee gadaasha dambe waxay si wada jir ah gacan uga geystaan ​​wax soo saar geesinimo iyo farsamo ah.
Qurxinta joomatari-ga caadiga ah
Isku-darka isku-dhafan ee isku-dhafan ayaa muujinaya bilicsanaanta guud ahaan. Heerarka gacanta aluminiumka ayaa kor u qaadaya qaabka SIZ
Kursi xafiis oo badan
Laga soo bilaabo afka ilmo-galeenka ilaa lumbar, SIZ waxay siisaa taageerada ugu fiican jirka bini'aadamka sameynta ka shaqeynta raaxeysi kale oo raaxo leh
Nidaamka Sychro-ga ee ka socda Donati (Talyaaniga) wuxuu bixiyaa hagaajinta xiisadda iyo qufulka foorarka.
Si loo muujiyo sharraxaadda joomateri ee sayniska iyo moodada, waxaan ku siineynaa "qaabka sarraynta" dabeecadda faahfaahin kasta oo toos ah.
Hagaajinta tayada xafiiska xafiiska
Naqshado badan oo shaqeynaya ayaa taageera howlaha iyo
isgaarsiinta qaab kasta, wax ku biirinaysa wax ku ool ah
iyo jawi xafiis oo firfircoon.
Hore: Kursiga Warshad Qiimaha Casaanka ah ee Casaanka ah - VIX - GOODTONE
Cinwaanka:No.18, Wadada QiaoGao, Magaalada Xiqiao, Degmada Nanhai, Foshan, Guangdong